Yenhema Kutsvaga Kurekodha Timu Nhengo Vanonzwa Kusachengeteka kubva kuCoronavirus | Ndinobva mac
Yenhema Kutsvaga kurekodha nhengo dzeboka hadzinzwe dzakachengeteka kubva kune coronavirus
Mamwe mazuva apfuura, kurekodha kwenyaya dzakateedzana Iyo Yemangwanani Show akange akaoma mutezo kwenguva pfupi mushure mekunge kesi ye coronavirus yaonekwa mune imwe yenhengo dzechikwata, kunyangwe nedziviriro matanho avanotevera. Asi, zvinosuruvarisa, zvinoita sekunge haisi yega iyo iri kukanganiswa necoronavirus.
Iyo komedhiyo nhepfenyuro Yenhema Kutsvaga, iwe uchawana akaoma mitezo kwemazuva akati wandei nekuda kwedambudziko rakafanana. Asi dambudziko rinopfuurira mberi, sezvo nhengo dzechikwata dzisingade kutangazve kutora firimu zvakare pachikumbiro chemusiki uye protagonist Rob McElhenney, uyo atumira meseji kune vaanoshanda navo.
Iyi meseji, iyo iwe yawakawana mukana Kusiyana-siyana, Tinogona kuverenga:
Sezvo zvinotyisa sezvazvinonzwika, tanga takamirira izvi kwemavhiki. Huwandu mudunhu huri kuwedzera uye nekudaro nhamba dzedu dziri kuita zvakafanana. Asi kusvika parizvino hapana humbowo hwekufambiswa chero kupi kubasa. Dhara redu rinoenderera kuve imwe yenzvimbo dzakachengeteka kupfuura dzose dzaungave kunze kwemusha wako.
Zviripachena kuti ruzivo urwu rwenhema zvachose, kubvira mumavhiki apfuura, nhengo dzinoverengeka dzechikwata chekurekodha dzakaedza hutachiona hwecoronavirus. Mwaka uno mutsva urikunyorwa muStudio Guta, nzvimbo yakave inotariswa necoronavirus nekuputika katatu kwakaonekwa mumwedzi wapfuura.
Pakutanga, gumi nenomwe nhengo dzeMythic Quest yekurekodha timu ivo vaive vaedza vaine hutachiona hwecoronavirus, kunyange hazvo zviremera zvedunhu zvakadzora huwandu hwehutachiona kusvika pa12 chete.
Vamiriri veMcElhenney vanotaura kuti kambani yakabvumirana nekambani ku teerera zvese zvinotenderwa kudzivirira coronavirus mukuwedzera pakuve nerubatsiro rweCDD, DGA nevakuru vematunhu.
Iyo firimu uye terevhizheni indasitiri iri kuyedza kuchengetedza zvigadzirwa zvakachengeteka panguva yedenda rekuchengetedza mabasa uye mabhizinesi, asi zviri pachena kuti zviri kuva zvakaoma zvikuru feat kuchengetedza izvo zvakambofungidzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Yenhema Kutsvaga kurekodha nhengo dzeboka hadzinzwe dzakachengeteka kubva kune coronavirus
Maitiro ekudzima otomatiki zvigadziriso pane yako Apple Watch
TSMC inosaina neApple kuraira kwayo kwekutanga kwemachips ane 3nm tekinoroji